Tambajotran’i Kaokazy: Momba ny Fiteny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Desambra 2013 11:17 GMT
9 Jona 2013, saripikan'i Sergey Ponomarev.
Ny teny rosiana no teny mampifandray ireo repoblika ao Kaokazy Avaratra. Tsy misy na dia tenin-teratany iray aza ka tsy teny Rosiana mba mahazo vahana any amin'ny sehatry ny famahanam-bilaogy ao Kaokazy Avaratra, eny fa na dia amin'ireo sehatra natokana ho fiadian-kevitra amin'ny raharahan-tokantrano ao amin'ny faritra aza dia atao amin'ny teny Rosiana.
Raha tsaraina amin'ny fampitam-baovao zarainy amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy, ny mpiserasera manerana an'i Kaokazy Avaratra dia mirona hamaky vaovao amin'ny teny rosiana – indrindra moa fa io no fitaovam-piasan'ny famoaham-baovao ao amin'ny faritra. Ao Dagestan irery ihany no nisy ezaka maromaro fampandrosoana sehatra tsy miankina amin'ny teny rosiana. Ny roa amin'ireo sehatra ireo miavaka indrindra dia ny Radio Liberty branch sy ny Ria-News division, izay samy miasa amin'ny fiteny Avar. Ankoatra izay, misy vavahadin-dahatsary, AVAR TV, vao nivoaka, izay manoloatra fantsona ho an'ny olom-pirenena haneho hevitra amin'ny fahafaha-mamokatra votoaty ôrizinaly amin'ny teny Avar.
Rehefa namakivaky ireo bilaogera mbola mavitrika tao Kaokazy Avaratra aho, dia maro ny nanazava ny antony namahanam-bilaogy tamin'ny fiteny Rosiana ho mahomby kokoa amin'ny fahazoana mpamaky maro—indrindra fa raha ifampiresaka amin'ny bilaogera hafa amin'ireo repoblika mifanolotra sisintany aminy.
Nahavita asa goavana i Timur Agirov, izay fantatra ao amin'ny LiveJournal ho Timag82, tamin'ny fanisana ny famahanam-bilaogy amin'ny fiteny tsy rosiana tao Kaokazy Avaratra, nanambatra tahirin-kevitra manokan'ny antontanisa hanaovana an-tsarintany ny fiteny isan-karazany. Manoratra amin'ny teny rosiana avokoa ireo zato voalohany ao amin'ny lisitr'i Agirov.
Ny sakana ara-pitenenana izay tsy maintsy ilàna ny fampiasana ny teny rosiana ho teny iraisana manerana an'i Kaokazy Avaratra dia hita ihany koa any amin'ny isaky ny repoblika tsirairay any. Any Dagestan, ohatra, mihoatra ny telopolo ny tenindreny manokana ifandraisan'ny mpiray vondro-teny ananan'ny mponina ao.
Mitovitovy amin'ny ao Dagestan ny tontolon'ny bilaogy ao Tsetsenia, na dia misy aza vitsy azo marihana izay manasongadina ny fanoratana tsy amin'ny teny rosiana, tahaka ny asa amin'ny fiteny roa an'i Gilani Lamaro, mpisera LiveJournal svd-1986, ary i Mukhammed Yusupov.
Any Ingushetia, mampiasa ny tenin-dreny ny bilaogera na dia tsy matetika kokoa aza. Iray amin'ny ohatra maningana mampiasa fiteny roa rehefa mibilaogy i Abu-Umar Sakhabi ao amin'ny LiveJournal. Mirona kokoa amin'ny teny rosiana ihany koa ny bilaogera any Circassia, na dia mety hahita maningana any ihany koa ianao, tahaka ny Circassian-language fahanan'i Astemir Shibzukho sy i Avraham Shmulevich.
Ny mampalaza ny teny rosiana dia noho ny anjara toeran'i Kaokazy avaratra ao anatin'ny Federasiona Rosiana (sy ny tantara lava dia lava niarahany tao amin'ny Firaisana Sovietika sy ny Ampiran'i Tsar). Mahavariana anefa fa mirona amin'ny fiarovan-tena kokoa ny bilaogera ao Kaokazy Avaratra amin'ny fampiasan-dry zareo ny teny rosiana ho fomba hifanakaikezana amin'ny hafa ao anatin'i Kaokazy, fa tsy hoe amin'ny fiankinana amin'ny aterineto rosiana loatra.
Toy izany ihany koa ny amin'ny teny rosiana, amin'ny mahafitenin'ny maro azy, mahazo tombony eo amin'ny sehatry ny siansa sy teknika ny fiarahamonina mandroso (mivelatra). Shmulevich, ohatra, nitaraina fa miatrika ady sarotra ananihana ny tenin-teratany:
[…] tsy mivelatra loatra ny voambolana sy ny voambolana manokana [na siantifika] amin'ny teny ao an-toerana. Sarotra ny miresaka toekarena, na ny teorian'ny zavakanto, ny fizika quantum amin'ny fiteny Tabasaran eny fa na amin'ny fiteny Avar aza.
Tsy mitovy hevitra amin'izany ny bilaogera Ramazan Radzhabov, ary milaza fa any an-kafa no misy ny fanazavana izany. nandresy lahatra izy fa afa-mivelatra mamokatra voambolana vaovao hampitana zava-tsarotra. Manampy ny bilaogera hafa Mukhamed Avarski:
Lamaody lany andro ny fanapariahana sy ny fampiroboroboana ny tenin-dreny [any Kaokazy Avaratra]. Sarotra dia sarotra ny manome loharanom-baovao [kely indrindra ilaina] an-tserasera momba ity resaka ity ka maty ho azy noho ny tsy fisian'ny mpitsidika ny ankamaroan'ny [tranonkala]. Nanomboka tamin'io avokoa ny karazana forums sy godekans [kianjam-bahoaka any Kaokazy] an-tserasera rehetra, saingy nivadika vetivety ho fludodroms [fampiarahan-teny roa avy amin'ny voambolana anglisy “flood” izay midika hoe tondra-drano sy ny voambolana rosiana “aerodrom” milaza ny “fiantsonam-piaramanidina,” izay manoritsoritra tranonkala iray feno spam] araka ny mahazatra. Tsy misy liana ny hampiasa ny lohany sy hieritreritra amin'izay hitranga amin'ny vahoaka very ny tenin-dreniny, ary tsy mbola nahita mihitsy aho hatramin'izao tahirin-kevitra manerana an'i Kaokazy miompana amin'ity olana ity.
Sarotra ny manazava hoe nahoana no tsy mety mahazo faka ao amin'ny aterineto ny tenin-dreny any Kaokazy Avaratra. Ny zavamisy, raha jerena avy amin'ny (rakitra) tahirin-kevitr'i Agirov, dia toa mihamitodika tsikelikely mankany amin'ny teny anglisy ho teny iraisana vaovao ny bilaogera manerana ny faritra, miala amin'ny teny rosiana ary mametraka sakana vaovao ho amin'ny fivelaran'ny famahanam-bilaogy amin'ny tenin-dreny.